Semalt Expert - Nzira Yokutanga A Free Blog Pa WordPress.com
WordPress.com ndiyo yakasununguka uye imwe yezvakanakisa mabhota mapuraneti paIndaneti. Pano, unogona kushandura zviri nyore zvinyorwa zvako uye zvinyorwa, asi porn, pharmacy, uye kubhejera nyaya dzakasiyana kana niches hazvitenderwi. Zviri pachena kuti vanhu vakasiyana-siyana vanotanga kutanga maitiro avo ekubvumira kubva pano, asi vazhinji vavo vanoenderera mberi kunobhadharwa mazita uye vanotanga kushandisa nzira dzekuzvigadzirira - aspire triton tank 2. Wordpress.com inobvumira vashandisi vayo kubatsirwa kuburikidza nekusarudza kwekubvisa mabhurogi. Zvinoreva kuti haufaniri kubhadhara kune chizinda kana sub-domain. Muchidimbu, uri kugovera mabhizimusi ewebsite yakagadzirirwa uye unogona kuisa mararamiro ako pasina chikonzero chekubhadhara chimwe chinhu.
Michael Brown, nyanzvi yepamusoro kubva kune Semalt , anopa apa mimwe mienzaniso yemabhulogi akachengetwa pazwipress.com:
Kutanga sei bhagi rebhaibheri pazwipress.com?
Kana iwe uchivhiringidzika pamusoro pekutanga bhadhiro yezwipress.com bhuku, unofanira kuverenga gwaro iri.
1. Sarudza neIndaneti Yakarongwa:
Chinhu chokutanga chaunofanira kuita ndechokusarudza nzvimbo yepaimba yepamusoro. Paunenge uchiita kudaro, unofanira kuve nechokwadi chokuti urongwa hwakafanana niche ye blog yako uye inoteerera. Somuenzaniso, kana iwe uri nebhizimisi uye uchida kukurudzira marimi yako kuburikidza ne wordpress.com blog, unofanira kusarudza shanduko inopa bhurogi rako kutarisa uye kutaridzika kwehutano. Saizvozvowo, ine zvinyorwa zvakasiyana-siyana uye zvigadziro zvewebsite dzekutsvaga, uye vanyori vezvenyanzvi vanogona kusarudza chero ipi zvayo yekusarudza kukura bhulogi yekusununguka pa wordpress.com..Saka, iwe unofanira kungovhara ku wordpress.com uye sarudza shanduko usati wapfuurira kunhanho inotevera.
2. Sarudza Musoro:
Sezvakaita wordpress.org, wordpress.com ine mhando dzakasiyana-siyana dzemashoko ekusarudza kubva. Chinyorwa ndicho chinzvimbo chako kana bhulogi inoratidzika. Iwe unofanirwa kusarudza chinyorwa nekuchenjera uye uone kuti inotaura pamusoro payo pamusoro pekodhi yako. Iwe unogona kuchinja mararamiro ekubatanidza, zvirongwa zvemajairika uye menus, uye zvinosanganisira mifananidzo kana imwe musoro ichisarudzwa. Endai kune Zvinyorwa Kusarudza nzvimbo kusarudza musoro wechido.
3. Sarudza Domain (yako bhorodhi kero kana zita) :(
Hazvina maturo, zvakaoma chaizvo kuwana nzvimbo yakakosha uye yakasiyana pane wordpress.com sezvo kukwikwidza kwakanyanya. Mikana ndeyokuti nzvimbo yawakasarudza yatotorwa, asi iwe haufaniri kunetseka sezvaunokwanisa kuedza imwe nzvimbo uye ona chekuwanikwa kwayo paIndaneti. Kana uri kufunga kuchitenga chinzvimbo, wordpress.com haafaniri kunge iwe sarudzo yako sezvo mazita emadunhu ekutengeswa pano ari madhura.
4. Sarudza Purogiramu:
Kana imwe zita rekugara rakasarudzwa, uye iwe wapedza matanho ekutanga, danho rechina ndotora chirongwa chako. Pakutanga, iwe haugoni kubhadhara chero chimwe chebhuku rako, saka unofanira kufanidza pane Sarudza Sarudzo uye utange. Vashandi venguva dzose havakwanisi kusarudza zvikwereti zvakabhadharwa sezvo zvichange zvakadhura uye hazvipi zvinyorwa zvakawanda sezvaunoda.
5. Gadzira Account:
Unofanirwa kushandisa yako yekutanga email ID kuti ugadzire nhoroondo. Vakawanda vevashandisi vanoshandisa Gmail neChris ID nokuda kwechinangwa ichi. Iwe unofanirwa kusarudza zita rekushandisa nephasiwedi nekuchenjera. Iva nechokwadi chokuti password yako ine mhando dzevanhu vakadai se "^^" uye "/ & #" kuitira kuti vaseki vasapinda mu blog yako munguva pfupi. Kana wapedza kubudisa yako yekutanga post, usakanganwa kugoverana navo mumagariro evanhu kuitira kuti vanhu vakawanda vazive nezveunyanzvi hwako hwokunyora.
Nzira iri nyore yekuumba chinyorwa kana peji ndeye kushandisa "Post" -> "Zvitsva" sarudzo kana "Peji" -> "Wedzera Izvo".
Kana wakasarudza kugadzira bhulogi pane imwe nzvimbo, haufaniri kuenda kune wordpress.com asi wordpress.org.